Barbera - Amagilebhisi - Iningizimu Afrika
I-Barbera iyinhlobonhlobo yewayini elibomvu elivame ukusetshenziselwa ukukhiqizwa kwe wayini yetafula (tab;e wine), kodwa futhi naseNyakatho Italy ukukhiqizwa kwewayini eliqhakazile (sparkling wine). Ososayensi baye behluleka ukukhomba umzali wayo.
Isifunda sasePiedmont senyakatho-ntshonalanga ye-Italy, lapho kusetshenziswe khona izilwane ezihlukahlukene iminyaka eminingi, kubhekwa njengekhaya elihlukahlukene. Ukuhlaziywa kwe-DNA, noma kunjalo, ukuthola ukuthi izinto ezihlukahlukene azifani nezezinye izinhlobo ezivela ePiedmont, okusikisela ukuthi uBarbara waziswa esifundeni ngesikhathi esithile.
Izinhlobonhlobo zivame ukubonwa njengenwayini lokuphuza nsuku zonke, okufanele zijabule lapho zincane ezinama-pasta, i-pizza, ushizi noma i-salami. Ukuhlonishwa kwayo kwakhula eminyakeni engamashumi amabili edlule ngenxa yomlimi wewayini wase-Italy, uGiacoma Bologna waseBraida, owakhiqiza iBarbera yokuqala edayiswa emhlabeni wonke ngonyaka ka-1984 futhi ngesikhathi esifanayo wabonisa ukuthi kungenzeka ukuthi izinhlobo zezinhlobonhlobo zokukhiqiza iwayini elibi kakhulu.
Ukuze enze le vinini, i-Bologna yenza ngokucophelela izihlahla zezivini zinciphise ukukhiqizwa, zivune amagilebhisi kamuva kunokujwayelekile, okwenza ukuba amagilebhisi abe noshukela ophakeme kanye nokuqukethwe okuphansi kwe-asidi, futhi edala iwayini izinyanga ezingu-16 ezigodini zaseFrance, ezinamabhadu amancane amaFrench.
Abafuduki base-Italy baye basakazeka ezihlukahlukene eCalifornia e-United States nase-Argentina. Ngenye yezinhlobonhlobo zewayini ezibomvu ezitshalwe kakhulu e-Italy.
Ezinye izilinganiso zendawo zitholakala e-Italy, kodwa ezihlukahlukene ziyaziwa ngokuthi i-Barbera kuwo wonke umhlaba.
Uprofesa u-Abraham Izak Perold wangenisa i-Barbera ngasekuqaleni kuka-1910 kanti uRalph Parker, umnikazi we-Altydgedacht estate eThekwiniville, wayengomunye wabakhiqizi bokuqala ukutshala izihlobo ezizungeze ngo-1920.
U-Altydgedacht ekuqaleni wasebenzisa izinhlobo ezihlukahlukene zokukhiqiza iwayini eliqinile, kodwa ngo-1992 waba yipulazi lokuqala izwe ukulidayisa njengewayini elilodwa le-varietal.
Izinhlobonhlobo zinezinyathelo ezincane eNingizimu Afrika. Ekuqaleni yatshalwe ngaphezu kwendawo enkulu endaweni yaseThekwini. Naphezu kokuthakazelisa kabusha kwezilwane ezihlukahlukene, izimboni ezingaphansi kuka-10 zisakhula ngokuzikhandla ezihlukahlukene.
Umlimi onamandla kakhulu, onamandla okukhiqiza angu-12 t / ha kuya ku-15 t / ha. Ukukhiqiza iwayini elihle lewayini, imivini kumele ilandelwe ukukhiqiza amancane amaqoqo amagilebhisi.
Amagilebhisi avuthwe ekuqaleni, kusukela ngesonto lesibili ngoFebhuwari.
Amajikijolo anesisindo esiphakathi ne-oval nge isikhumba esimnyama se-violet uma sesivuthiwe ngokugcwele.
Amaqabunga awo aluhlaza okwesibhakabhaka avulekile, ngobukhulu obuphakathi nendawo emihlanu.
I-Barbera izwela phansi kwe-downy mildew nomonakalo womoya. Kuyafaneleka ngokuvuna okwenziwa ngemishini.
ENingizimu Afrika i-Barbera ingase ithengiswe njengewayini elilodwa noma lihlanganiswe nezinye izinhlobo ezahlukene.
Iwayini elenziwe ngamagilebhisi amancane lihlotshaniswa nesithelo esisha nesomisiwe, kanti labo abenziwe ngamagilebhisi avuthiwe banamapulangwe amaningi ashizibhisi namabhisikidi omuncu.